ကိုရီးယားဇာတျကားတှမှော အသုံးမြားတဲ့ စကားစုလေးမြား (၂)
16. 하지말라고 (hajimallago) (ဟာဂြီမားလျရာဂို) – I said ‘don’t do that’
မလုပျပါနဲ့၊ မစပါနဲ့ . . . လို့အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။
17. 거짓말이야 (geojinmariya) (ဂျေါဂဈြမားလျအီယာ) – It’salie
မြားသောအားဖွငျ့ ဇာတျလမျးတှထေဲမှာ လိမျလညျသူတဈဦးနဲ့တှဆေုံ့တဲ့အခါ၊ လိမျလညျသူပွောတဲ့စကားက အလိမျတှေ၊ အညာတှဖွေဈကွောငျး ထုတျဖျောပွောဆိုတဲ့အခါ အသုံးပွုလရှေိ့တဲ့ စကားလုံးလေးပါ။ "အဲ့ဒါလိမျတာ" "ညာနတော" ဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။
18. 거짓말 하지마 (geojinmal hajima) (ဂျေါဂဈြမားလျ ဟာဂြီမား)– Don’t lie
"မလိမျပါနဲ့" ဆိုတဲ့စကားစုလေးကတော့ "lie - 거짓말" ဆိုတဲ့စကားနဲ့ "don’t do -하지마 " ကို ပေါငျးစပျထားတာဖွဈပါတယျ။ ကိုရီးယားဇာတျကားတှထေဲ အကွားရအမြားဆုံး စကားစုလေးပေါ့။
19. 죽을래? (jugeullae) (ဂြု့ကူးလယျရျ) – Do you want to die?
"နငျ - သခေငျြလို့လား" . . . ဇာတျကားတှထေဲမှာ စိတျဆိုးနတေဲ့ ဇာတျကောငျက ပွောလပွေ့ောထရှိတဲ့စကားပါပဲ။
죽다 (jukda | to die) ဆိုတာကတော့ သသေညျလို့အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။
-을래(요) (eullae(yo)) ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားသဒ်ဒါကတော့ "to want" "ခငျြတယျ" ကို ဆိုလိုပါတယျ။ အမေးစကားအဖွဈ အသုံးပွုခငျြတယျဆိုရငျတော့ နောကျဆုံးမှာ "?" ထညျ့ပွီး ပွဆေိုတဲ့အခါ ‘do you want?’ "ခငျြလို့လား" ဆိုပွီး ဖွဈသှားပါတယျ။
20. 나 먼저 갈게 (na meonjeo galge) (နာ - မှနျးဂြောဂါးလျကယျ) – I will leave first
"ငါအရငျသှားမယျ" ဆိုတဲ့စကားလေးပါ။ ကိုယျမနှဈသကျတဲ့လူနဲ့တှဆေုံ့တဲ့အခါမှာ အမြားဆုံးအသုံးပွုလရှေိ့ပါတယျ။ နငျနခေဲ့အုနျး၊ ငါအရငျသှားမယျ၊ သှားတှလေို့ကျမယျ ဆိုပွီး ပွောဆိုတဲ့အခါ အသုံးပွုတဲ့၊ အသုံးမြားတဲ့ စကားလေးပေါ့။
21. 그래? (geurae) (ဂရယျလျ) / 진짜? (jinjja) (ဂငျြးဂြာ) / 정말? (jeongmal) (ဂြှနျးမားလျ) – Really?
ကိုရီးယားဇာတျကားတှမှော တှရေ့လရှေိ့တာကတော့ အတငျးပွောတဲ့အခါ၊ တဈစုံတဈယောကျရဲ့အတှငျးရေးအခြို့ကိုသိရတဲ့အခါ အာမဋေိတျအနနေဲ့အသုံးပွုတဲ့စကားစုလေးတှပေါ။ တဈခါတဈလမှောတော့ ဒီစကားစုလေးတှရေဲ့နောကျမှာ 요 (yo) နဲ့ဆုံးတာကို ကွားဖူးကွပါမှာ။ 그래요 (geuraeyo), 진짜요 (jinjjayo) and 정말요? (jeongmallyo). အဓိပ်ပာယျကတော့ အတူတူပါပဲ။ နောကျမှာ 요 (yo) ပါတာကတော့ ပိုပွီး ယဉျကြေးတဲ့သဘောပေါ့။
22. 세상에!? (sesange) (ဆယျဆနျးနဲလျ) – What in the world!?
"ကမ်ဘာကွီးဘာတှဖွေဈနပွေီလဲ?" . . . ဒီစကားစုလေးကတော့ မယုံကွညျနိုငျအောငျဖွဈနရေမှုတှကေို ဖျောပွရနျအတှကျ အသုံးပွုလရှေိ့ပါတယျ။
23. 안돼 (andwae) (အားနျဒှယျ) – It can’t be (it isn’t allowed)
"ဒါမဖွဈနိုငျဘူး" "'ဒီလိုမဖွဈရဘူး။" . . .အစရှိသဖွငျ့ အဓိပ်ပာယျရတဲ့စကားစုလေးပါ။
24. 사과해! (sagwahae) (ဆာဂှာဟယျ) / 사과하세요! (sagwahaseyo) (ဆာဂှာဟာဆယျရို) – Apologize!
"တောငျးပနျပါတယျ" . . .ရုပျရှငျဇာတျကားတှထေဲမှာ အကွားရဆုံး စကားကတော့ 사과해! (sagwahae) ဆိုတဲ့ စကားလေးပါပဲ။ ပိုပွီး ယဉျယဉျကြေးကြေးပွောခငျြရငျတော့ 사과하세요! (sagwahaseyo) ဆိုပွီး အသုံးပွုလရှေိ့ပါတယျ။
25. 너 미쳤어? (neo michyeosseo) (နျော - မိခြေျာ့ဆော) – Are you crazy?
"မငျးရူးနပွေီလား" ဆိုတဲ့ စကားလေးကို ကွားဖူးပါသလား? ဒီစကားကတော့ ကိုရီးယားအယူအဆအရဆိုရငျ ရိုငျးစိုငျးတဲ့၊ ရငျ့သီးတဲ့စကားတဈခုပါပဲ။ စကားလကျဆုံကနြခြေိနျမှာ ဒီစကားကိုပွောလိုကျတယျဆိုရငျတော့ အလှနျ့အလှနျကို ရိုငျးစိုငျးတဲ့ကိစ်စတဈခုပါပဲ။
26. 미친놈 (michinnom) – (မိခငျြးနုမျး) - Crazy guy
"အရူး" 미친 (michin), “crazy” + 놈 (nom), ‘person’ ကိုပေါငျးစပျထားတဲ့ "အရူး" ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ နောကျထပျအဓိပ်ပယျတူ စကားလေးတဈခှနျးကတော့ ‘나쁜놈’ (nappeunnom) ပဲဖွဈပါတယျ။
27. 오빠 (oppa) (အိုပါး) – Older brother
"အကို" ဆိုတဲ့ ဒီစကားလုံးလေးကတော့ ကောငျမလေးက ကိုယျ့ထကျကွီးတဲ့ အဈကိုတဈယောကျကို ချေါဝျေါသုံးစှဲတဲ့စကားလေးပဲဖွဈပါတယျ။ ကောငျလေးတဈယောကျက ကိုယျ့ထကျကွီးတဲ့အဈကိုကို ချေါခငျြတယျဆိုရငျတော့ 형 (hyeong) လို့ချေါရမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ကိုရီးယားစကားလုံးတှကေ အသုံးမြားတဲ့ တဈဦးနဲ့တဈဦးချေါဝျေါသုံးစှဲတဲ့ အသုံးလေးအခြို့ကိုလညျး ဖျောပွပေးလိုပါတယျ။
(၁) 오빠 (oppa) (အိုပါး) - "အဈကို" - ကောငျမလေးက သူ့ထကျအသကျကွီးတဲ့အမြိုးသားကို ချေါဝျေါသုံးစှဲသညျ့အသုံးအနှုနျး
(၂) 형 (hyeong) (ဟရှနျး) - "အဈကို" - ကောငျလေးက သူ့ထကျအသကျကွီးတဲ့အမြိုးသားကို ချေါဝျေါသုံးစှဲသညျ့အသုံးအနှုနျး
(၃) 누나 (nuna) (နူနာ) - "အဈမ" - ကောငျလေးက သူ့ထကျအသကျကွီးတဲ့အမြိုးသမီးကို ချေါဝျေါသုံးစှဲသညျ့အသုံးအနှုနျး
(၄) 언니 (eonni) (အိုနီး) - "အဈမ" - ကောငျမလေးက သူ့ထကျအသကျကွီးတဲ့အမြိုးသမီးကို ချေါဝျေါသုံးစှဲသညျ့
(၅) 이모 (imo) (အီမို) - "အဒျေါ" - အသကျအလယျအလတျအရှယျ သငျနှငျ့ခငျမငျနသေညျ့ အမြိုးသမီး (ဥပမာ - သငျမကွာခဏသှားလရှေိ့သော ဆိုငျတဈဆိုငျ၏ ပိုငျရှငျအမြိုးသမီး)
(၆) 아줌마 (ajumma) (အာဂြှမျးမား)- "အဒျေါကွီး" - အသကျအလယျအလတျအရှယျ သငျနှငျ့ရငျးနှီးကြှမျးဝငျမှုမရှိသညျ့ အမြိုးသမီး
(၇) 아저씨 (ajeossi) (အာဂြောရှိ) - "ဦးလေးကွီး"
(၈) 선배 (seonbae) (ဆှနျးဘယျ) - ကိုယျနှငျ့ရငျးနှီးသညျ့ ကိုယျ့အထကျ Sr. (Senior) ကသြညျ့ ကြောငျးနဘေကျ
(၉) 후배 ( hubae) (ဟူဘယျ) - ကိုယျနှငျ့ရငျးနှီးသညျ့ ကိုယျ့အောကျ Jr. (Junior) ကသြညျ့ ကြောငျးနဘေကျ
ကိုရီးယားဇာတ်ကားတွေမှာ အသုံးများတဲ့ စကားစုလေးများ (၂)
16. 하지말라고 (hajimallago) (ဟာဂျီမားလ်ရာဂို) – I said ‘don’t do that’
မလုပ်ပါနဲ့၊ မစပါနဲ့ . . . လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
17. 거짓말이야 (geojinmariya) (ဂေါ်ဂျစ်မားလ်အီယာ) – It’salie
များသောအားဖြင့် ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ လိမ်လည်သူတစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါ၊ လိမ်လည်သူပြောတဲ့စကားက အလိမ်တွေ၊ အညာတွေဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့အခါ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ စကားလုံးလေးပါ။ "အဲ့ဒါလိမ်တာ" "ညာနေတာ" ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
18. 거짓말 하지마 (geojinmal hajima) (ဂေါ်ဂျစ်မားလ် ဟာဂျီမား)– Don’t lie
"မလိမ်ပါနဲ့" ဆိုတဲ့စကားစုလေးကတော့ "lie - 거짓말" ဆိုတဲ့စကားနဲ့ "don’t do -하지마 " ကို ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားဇာတ်ကားတွေထဲ အကြားရအများဆုံး စကားစုလေးပေါ့။
19. 죽을래? (jugeullae) (ဂျု့ကူးလယ်ရ်) – Do you want to die?
"နင် - သေချင်လို့လား" . . . ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ စိတ်ဆိုးနေတဲ့ ဇာတ်ကောင်က ပြောလေ့ပြောထရှိတဲ့စကားပါပဲ။
죽다 (jukda | to die) ဆိုတာကတော့ သေသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
-을래(요) (eullae(yo)) ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားသဒ္ဒါကတော့ "to want" "ချင်တယ်" ကို ဆိုလိုပါတယ်။ အမေးစကားအဖြစ် အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံးမှာ "?" ထည့်ပြီး ပြေဆိုတဲ့အခါ ‘do you want?’ "ချင်လို့လား" ဆိုပြီး ဖြစ်သွားပါတယ်။
20. 나 먼저 갈게 (na meonjeo galge) (နာ - မွန်းဂျောဂါးလ်ကယ်) – I will leave first
"ငါအရင်သွားမယ်" ဆိုတဲ့စကားလေးပါ။ ကိုယ်မနှစ်သက်တဲ့လူနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာ အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ နင်နေခဲ့အုန်း၊ ငါအရင်သွားမယ်၊ သွားတွေ့လိုက်မယ် ဆိုပြီး ပြောဆိုတဲ့အခါ အသုံးပြုတဲ့၊ အသုံးများတဲ့ စကားလေးပေါ့။
21. 그래? (geurae) (ဂရယ်လ်) / 진짜? (jinjja) (ဂျင်းဂျာ) / 정말? (jeongmal) (ဂျွန်းမားလ်) – Really?
ကိုရီးယားဇာတ်ကားတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတာကတော့ အတင်းပြောတဲ့အခါ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အတွင်းရေးအချို့ကိုသိရတဲ့အခါ အာမေဋိတ်အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့စကားစုလေးတွေပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ဒီစကားစုလေးတွေရဲ့နောက်မှာ 요 (yo) နဲ့ဆုံးတာကို ကြားဖူးကြပါမှာ။ 그래요 (geuraeyo), 진짜요 (jinjjayo) and 정말요? (jeongmallyo). အဓိပ္ပာယ်ကတော့ အတူတူပါပဲ။ နောက်မှာ 요 (yo) ပါတာကတော့ ပိုပြီး ယဉ်ကျေးတဲ့သဘောပေါ့။
22. 세상에!? (sesange) (ဆယ်ဆန်းနဲလ်) – What in the world!?
"ကမ္ဘာကြီးဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ?" . . . ဒီစကားစုလေးကတော့ မယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရမှုတွေကို ဖော်ပြရန်အတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
23. 안돼 (andwae) (အားန်ဒွယ်) – It can’t be (it isn’t allowed)
"ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး" "'ဒီလိုမဖြစ်ရဘူး။" . . .အစရှိသဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့စကားစုလေးပါ။
24. 사과해! (sagwahae) (ဆာဂွာဟယ်) / 사과하세요! (sagwahaseyo) (ဆာဂွာဟာဆယ်ရို) – Apologize!
"တောင်းပန်ပါတယ်" . . .ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ အကြားရဆုံး စကားကတော့ 사과해! (sagwahae) ဆိုတဲ့ စကားလေးပါပဲ။ ပိုပြီး ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောချင်ရင်တော့ 사과하세요! (sagwahaseyo) ဆိုပြီး အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
25. 너 미쳤어? (neo michyeosseo) (နော် - မိချော့်ဆော) – Are you crazy?
"မင်းရူးနေပြီလား" ဆိုတဲ့ စကားလေးကို ကြားဖူးပါသလား? ဒီစကားကတော့ ကိုရီးယားအယူအဆအရဆိုရင် ရိုင်းစိုင်းတဲ့၊ ရင့်သီးတဲ့စကားတစ်ခုပါပဲ။ စကားလက်ဆုံကျနေချိန်မှာ ဒီစကားကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ အလွန့်အလွန်ကို ရိုင်းစိုင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။
26. 미친놈 (michinnom) – (မိချင်းနုမ်း) - Crazy guy
"အရူး" 미친 (michin), “crazy” + 놈 (nom), ‘person’ ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ "အရူး" ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ နောက်ထပ်အဓိပ္ပယ်တူ စကားလေးတစ်ခွန်းကတော့ ‘나쁜놈’ (nappeunnom) ပဲဖြစ်ပါတယ်။
"အကို" ဆိုတဲ့ ဒီစကားလုံးလေးကတော့ ကောင်မလေးက ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်ကို ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲတဲ့စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်လေးတစ်ယောက်က ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့အစ်ကိုကို ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 형 (hyeong) လို့ခေါ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရီးယားစကားလုံးတွေက အသုံးများတဲ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲတဲ့ အသုံးလေးအချို့ကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။
(၁) 오빠 (oppa) (အိုပါး) - "အစ်ကို" - ကောင်မလေးက သူ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသားကို ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲသည့်အသုံးအနှုန်း
(၂) 형 (hyeong) (ဟရွန်း) - "အစ်ကို" - ကောင်လေးက သူ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသားကို ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲသည့်အသုံးအနှုန်း
(၃) 누나 (nuna) (နူနာ) - "အစ်မ" - ကောင်လေးက သူ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးကို ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲသည့်အသုံးအနှုန်း
(၄) 언니 (eonni) (အိုနီး) - "အစ်မ" - ကောင်မလေးက သူ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးကို ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲသည့်
(၅) 이모 (imo) (အီမို) - "အဒေါ်" - အသက်အလယ်အလတ်အရွယ် သင်နှင့်ခင်မင်နေသည့် အမျိုးသမီး (ဥပမာ - သင်မကြာခဏသွားလေ့ရှိသော ဆိုင်တစ်ဆိုင်၏ ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီး)
(၆) 아줌마 (ajumma) (အာဂျွမ်းမား)- "အဒေါ်ကြီး" - အသက်အလယ်အလတ်အရွယ် သင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသည့် အမျိုးသမီး
(၇) 아저씨 (ajeossi) (အာဂျောရှိ) - "ဦးလေးကြီး"
(၈) 선배 (seonbae) (ဆွန်းဘယ်) - ကိုယ်နှင့်ရင်းနှီးသည့် ကိုယ့်အထက် Sr. (Senior) ကျသည့် ကျောင်းနေဘက်
(၉) 후배 ( hubae) (ဟူဘယ်) - ကိုယ်နှင့်ရင်းနှီးသည့် ကိုယ့်အောက် Jr. (Junior) ကျသည့် ကျောင်းနေဘက်